Semalt: Nzira Yokugadzira Sei Kushandura KweWebhu Kakawanda?
Professional web scrapers pane kungounganidza zvose zvinangwa-data panguva imwechete. Muteteri weHTTP unokubvumira kuparadzira mapeji ewebhu kubva pane zvinangwa-webhusaiti. Nyoreji yakazara izere yehumwe ruzivo ruzivo runogona kushandiswa kumativi emisika uye kushushikana kweunyanzvi.
Kana uri kushanda pakutsvaga dhiyabhorosi yekuongorora maitiro uye kukwanisa kwebhizimisi, web scraping ndiyo mhinduro yekupedzisira. Nekutanga kwevashandisi vepawebhu webhutori, web scraping inzira yekuwana nekudzorera data kubva pawebhu mumasimboti akafanotaurwa asati aongororwa nyore nyore - box mod 100 watt.
Muchirongwa ichi chekutsvaira, iwe uchadzidzira nzira yekuita webhu. Cherechedza kuti kutsva isimba rakagadzirirwa purogiramu uye vagadziri vemunharaunda 'inokubvumira kuti iwe ugadzire zvishandiso zvekutsvaga webhu . Kushanda kweWebhu mukana wekuti iwe uwedzere bhizinesi rako uye upe ruzivo rwakakosha pamusoro pezvigadzirwa zvako kune vanotengesa.
Maitiro ekubuda uye nyaya mumatareji ehutukudzi ari kuonekwa. Mazuva ano, unogona kutora nyore uye kuchengetedza zvinyorwa kubva kune mawebhusayithi uchishandisa smartphone yako. Semuenzaniso, Instapaper inogona kutendwa chekrini chekudzivirira iyo inokubvumira kuti uchengete kopi yako yekutsvaga-mavara pafoni yako.
Kuvatengesi vemari, Mint. com is web scraping tool to consider. Iri sangano rinoronga uye rinogadzirisa mazita emisika yebhizimisi rako uye rinoratidzira data mukanakisisa muchidimbu nematafura. Mint. com inobatsira vatengesi kuti vaongorore maonero ekugadzirwa kwezvinhu uye kushandiswa kwemitambo.
Kucherechedza mitemo mune web web scraping
. Dzimwe nzvimbo dzepa static dzinosanganisira "Complete Disallow" mirayiridzo. Aya mazano haabvumi web scrapers kuti aparadze aya marudzi emawebsite.
Kushandura kweWebhu inzira yekuwana data kubva kune dzimwe nzvimbo. Zvisinei, kuwana ruzivo kubva kune dzimwe nzvimbo uye kuisa zvinyorwa pawebsite yako kunonyanya kuonekwa sekuputsa kwemashoko uye "Kuba. "
Nzira yekuita web scraper
Gadzira dhigirii rakanaka - dhigiridzi ichakubvumira kuti uwanezve ma URL kubva kune dzimwe nyika
Dhedup feature - Dhedup ichabatsira kuvhara kubudiswa kwemashoko akafanana kanopfuura kamwe
Gadzira HTTP Fetcher - The Fetcher inoshanda kuti iwane mapeji ewebhu kubva pane zvinangwa-webhusaiti
Gadzirai URL yako Yejaji - Muteja anotarisa
Dhiyabhorosi - Iyi ndiyo nzvimbo iyo mashoko anotsvaga achaendeswa kunoshandiswa nekugadziriswa
Chinangwa chikuru chekuvaka web web scraper iri kubudisa data kubva pamapeji ewebhu apo ichicherechedza zvibereko zvayo nekubudirira. Kana iwe uri kushanda pakakura kukuru, tarisa zvimwe zvinhu zvakadai sedarekukurukurirana, De-kududzira, uye DNS kusarudza. Kusarudzwa kwepurogiramu yako yemutauro kunokoshawo. Nhamba yakanaka ye web scrapers inosarudza nzvimbo dzekutsvaga paPython.
Kuvaka webhusaiti yakanyanyisa ndiko nyore. Zvisinei, unofanirwa kushanda pahuwandu hwehutachiona hwebhu yako yekudzivirira kukanganisa kwekodzero dzekodzero uye webhusaiti yekushungurudza pamusana pemaseva ari kutakurwa. Gadzirisa uye shandisa inobudirira yebhu web kuburikidza nekuongorora zvinhu zvakasiyana-siyana zvekutsvaga uye zvepfungwa zvinhu. Shandisa pirinhi iri pamusoro-yakarongedza kuita web scraper iyo ichasangana neyese yekutsvaga kwewebhu.